4 Sababood Oo Barcelona Ku Riixaysa In Ayna U Dhaqaaqin Saxiixa Antoine Griezmann – Wararka Ciyaaraha Maanta
4 Sababood Oo Barcelona Ku Riixaysa In Ayna U Dhaqaaqin Saxiixa Antoine Griezmann
March 23, 2019 kooxda La Liga, Wararka Maanta 0
Wargayska Sport ayaa shaaca ka qaaday 4 sababood oo kooxda Barcelona ku keentay in ay isaga baxdo xiisaha ay u qabtay saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann inkasta oo uu xiddigu doonayo in uu isaga tago Atletico dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Waxa soo baxay warar badan oo Antoine Griezmann la xiriirinaya in uu isaga tago kooxda Atletico Madrid kadib markii ay Atletico Madrid ka hadhay champions League taas oo keentay in mar kale lala xiriirinayo kooxda Barcelona.
Barcelona ayaa si weyn ugu faraxsanayd in ay la soo saxiixato Antoine Griezmann kadib markii ay wararkaas soo bexeen laakiin Barcelona ayaa dib uga fikirtay arintaas.
Wargayska Sport ee ka soo baxa Catalonia ayaa sheegay in ay jiraan sabab ka dambaysa ka noqoshada Barcelona ee xiisaha xiddiga reer France.
Sababta 1-aad ayaa ah in ay kooxda Barcelona 89% doonayso saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Eintracht Frankfurt ee Luka Jović.
Diidista Barcelona ayaa sidoo kale sabab u ah muqaal uu xiddigu baraha bulshada soo dhigay xilli ciyaareedkii hore markii uu go,aansaday in uu sii joogo Atletico Madrid taas oo ka xanaajisay maamulka Barcelona.
Sababta 2-aad ayaa ah in mushaharka 23 milyan ah ee uu xiddigu haatan sanadkii uga qaato Atletico Madrid in ay ku badan tahay kooxda Barcelona maadama ay dhawaan xiddigo heshiis cusub ka saxiixdeen korna ugu qaadeen mushaharka cusub.
Sababta ugu dambaysa ayaa ah qaab ciyaareedka liita ee xiddiga ee xilli ciyaareedkan isaga oo kaliya dhaliyay 12 gool tartamada oo dhan.